Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaliland oo ka jawaabtay hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble | Dayniile.com
Home Warkii Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaliland oo ka jawaabtay hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaliland oo ka jawaabtay hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaliland ayaa ka jawaabtay hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobleee ahaa in Somaliland ay si qasab ah luga soo masaafurisay degmada Laascaanood dad Soomaliyeed , falkaas oo uu ku tilmaamay mid aad looga xumaado.
Qoraal ku qornaa luuqa English-ka oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda Somaliland ayaa waxaa lagu sheegay in Somaliland ay ku qasban tahay inay bixiso jawaan cadeyn ah oo an waxba kajirin hadalka Ra’iisul Wasaaraha.
“ Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu doortay in uu gudbiyo warar aan sal iyo raad toona lahayn. qadiyadda Somaliland e iyo go’aamadda lagama maarmaanka u ah masaafurinta shaqsiyaad la soo xulay, oo si sharci darro ah u degay degmada Laascaanood, xarunta gobolka Gobolka Sool, Somaliland ayaa lagu yiri” Qoraalka.
Sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in Somaliland 30-kii sano ee la soo dhaafay ay martigelisay qaxooti ka yimid wadamada deriska waafaqsan waajibaadka bani’aadamnimo ee Somaliland ee ku xusan xeerka caalamiga ahoo la xiriira shuruucda gudaha iyo xeerarka muwaadinimada.
“ Waxaa muhiim ah in la xoojiyo in go’aanka musaafurinta tiro shakhsiyaad ah oo laga soo xulay Dhulka Somaliland waxaa dhiirrigeliyay arrimo khuseeya amniga, oo ay ku jiraan codsi ka yimid bulshada deegaanka iyo maamulka degmada Laascaanood. Warbixinnada iyo la -tashiga sirdoonka waxay tilmaam cad ka bixisay in shaqsiyaadkaasi ay ammaanka dadka deegaanka ku ridayeen halis. Sidaasi darteed, Somaliland waxay ku khasbanaatay inay tallaabo qaado, laakiin hab uun bay ku dhaqaaqday si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale lagu sheegay qoaralka Wasaaradda Arrimaha dibada Somaliland.
Previous articleMadaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo kula kulmay magaalada Addis-ababa Yoweri Museveni
Next articleFarmaajo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
Dowladda Kenya ayaa horey maxkamadda ICJ ugu eedeysay in aysan dhexdhexaad ahayn, waxayna tilmaamtay in aysan aqbali doonin xukunka maxkamadda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya...